How To Use Leverage - Full December 2021 Guide on Cryptocurrency Leverage!
Ungakusebenzisa Kanjani Ukuphakama - Umhlahlandlela Ogcwele Wokusebenzisa i-Cryptocurrency!
Ukusetshenziswa kungaba ithuluzi elibalulekile emizameni yakho yokuhweba nge-cryptocurrency. Ukuthi uthatha isinqumo sokuhweba ngesisekelo se-DIY noma usebenzisa amasiginali wethu we-crypto akalwe kakhulu - amandla anamandla anomthelela ofisele ekukhuphuleni amandla akho okuthenga.
Lokho kusho ukuthi, uma une- $ 100 kuphela ku-akhawunti yakho ye-brokerage kodwa usebenzisa amandla we-1: 10 - ukhulisa ngokushesha imali yakho yokuhweba ibe ngu- $ 1,000. Kepha, ukuphakama futhi kukhulisa ubungozi bakho - njengaphezulu kokusebenzisa inzuzo, kwenza okufanayo ngokulahleka.
Kulo mhlahlandlela, sichaza ukungena nokuphuma kwendlela yokusebenzisa amandla ngendlela enganaki ingozi. Siphinde sixoxe ngamapulatifomu amahle kakhulu wokuhweba anikezela amandla kumakhasimende athengisa.
Ungasisebenzisa Kanjani Isilinganiso Manje - Ukuhamba Ngokushesha Komlilo
Uma ufuna ukubuka konke ngomlilo okusheshayo kokuthi ungasisebenzisa kanjani isisekelo kupulatifomu elawulwayo ye-idijithali yemali manje - landela izinyathelo ezichazwe ngezansi!
Isinyathelo 1 - Vula i-Akhawunti Yokuhweba ye-Crypto: Ukuze usebenzise amandla, udinga i-akhawunti enendawo elawulwa ngomthetho yokuhweba. I-Capital.com iyipulatifomu enhle kakhulu yale njongo - njengoba ukwazi ukuhweba ngekhomishini engu-0% futhi amandla anikezwa ezimakethe ezingaphezu kuka-200 + zedijithali.
Isinyathelo 2 - Yenza Idiphozithi: Manje njengoba une-akhawunti ku-Capital.com - yenza idiphozi. Ungakhetha kusuka kudebhithi / ikhadi lesikweletu, ucingo lwasebhange, noma i-e-wallet.
Isinyathelo 3 - Sesha Izimakethe ze-Crypto: Sesha izimakethe ze-crypto ofisa ukusebenzisa amandla kuzo. Isibonelo, uma ufuna ukusebenzisa i-Litecoin - faka i-'LTC 'ebhokisini lokusesha bese uqhafaza ku-LTC / USD lapho ilayisha.
Isinyathelo 4 - Faka iSiteki bese ufaka umkhawulo wokusebenzisa: Uzodinga ukusetha i-oda. Khetha kusuka ku-oda lokuthenga / lokuthengisa, faka isigxobo sakho bese ukhetha isilinganiso sokulinganisa ofisa ukusisebenzisa (isb. 1: 2).
Isinyathelo 5 - Qinisekisa uku-oda: Uma usuyithembile imininingwane oyifakile - faka i-oda.
I-Trade Crypto Manje
Ama-67.7% ama-akhawunti wabatshalizimali athengisa imali alahlekelwa yimali lapho kuthengiswa ama-CFD ngalo mhlinzeki.
Kuyini amandla? Okuyisisekelo
Ngendlela yayo eyisisekelo, amandla okukuvumela akuvumela ukuthi ukhulise inani lohwebo lwakho. Ukusetshenziswa kuvame ukusetshenziswa ezimakethe zendabuko zokuhweba i-forex, noma kunjalo, selivele lenza indlela eya enkundleni yezinkulungwane zamarandi ezi-cryptocurrency. Lapho ufaka amandla okusizakala esikhundleni sakho, ubolekiswa ngempumelelo le mali ngumthengisi.
Lokhu kukuvumela ukuthi uhwebe ngokuningi kakhulu kunalokho onakho ku-akhawunti yakho. Isibonelo, ake sithi ufuna ukuhamba isikhathi eside ku-BTC / USD. Ukulungele ukufaka engcupheni ama- $ 500 kulo msebenzi futhi unqume ukusebenzisa amandla we-1: 5. Ngokombono, lokhu kusho ukuthi manje usuhweba nge $ 2,500 - noma ngabe une- $ 500 kuphela ku-akhawunti yakho.
Mhlawumbe indlela elula yokubuka isisekelo ukuthi uzobe wandisa inzuzo yakho nokulahlekelwa kwakho. Isibonelo, uma uzuze u-10% kusikhundla sakho se- $ 500 BTC / USD, lokhu ngokuvamile kuzoba yinzuzo engu- $ 50. Kodwa-ke, ngokusebenzisa amandla we-1: 5, le nzuzo yama- $ 50 inyuselwa ku- $ 250.
I-Cryptocurrency CFDs ehlisiwe
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi uma ufuna ukufinyelela ekusetshenzisweni lapho uthengisa ama-cryptocurrensets - kungcono udlule kumthengisi weCFD. Ngaphandle kwalokho, ngokuhweba ngokushintshaniswa okungalawulwa, ubeka imali yakho engcupheni. Masithathe i-BitMEX njengesibonelo esihle. Lokhu kushintshaniswa okungalawulwa kunikeza amandla afinyelela ku-1: 100 lapho uhweba i-Bitcoin ngokumelene ne-USDT.
Yize ekuboneni kokuqala ungahle ulingwe yimingcele ephakeme kangaka, abasunguli beBitMEX njengamanje basaphenywa ngamacala amaningi obugebengu - kubandakanya ukukhwabanisa imali. Futhi, njengoba iBitMEX isebenza ngaphandle kokuxhaswa yisiphathimandla sezezimali esaziwayo - ayikho indlela eqinisekile yomlilo yokwazi ukuthi izimali zakho zokutshala imali ziphephile noma cha.
Ibuyiselwe ezinkontilekeni-zokwehluka - noma ama-CFD, lezi yizinsimbi zezezimali ezinikezwa amafemu alawulwa ngabathengisi. Balandelela inani lomhlaba wangempela wefa elifana ne-cryptocurrensets efana-ne-efana - okusho ukuthi ungahweba ngaphandle kokudinga ukuba ngumnikazi noma ukugcina amathokheni. Esikhundleni salokho, kuyicala nje lokunquma ukuthi inani le-cryptocurrency lizonyuka yini ekuweni.
Ngokweqile, ama-CFD akuvumela ukuthi usebenzise amandla kubathengisi bakho be-cryptocurrency. Nakulokhu futhi, umthengisi weCFD okukhulunywa ngaye uzolawulwa kakhulu, yingakho ekwazi ukunikeza amandla kumakhasimende athengisa. Endabeni yeCapital.com, isibonelo, umthengisi ugunyaziwe futhi ulawulwa yi-Financial Conduct Authority (FCA) e-UK kanye neCyprus Securities and Exchange Commission (i-CySEC).
Yize abathengisi be-CFD abalawulwa bengakunika amandla okuzuza lapho uhweba ama-cryptocurrensets - imikhawulo ethile ingasebenza. Lokho kusho ukuthi, izakhamizi zamanye amazwe zizobanjelwa ekutheni zingasebenzisa malini. Isibonelo, uma uzinze e-European Union noma e-Australia, lokhu kufakwe ku-1: 2. Okushoyo - ungasiphinda isigxobo sakho, kepha akusekho.
Kwezinye izifunda, akunamkhawulo nhlobo. Ngakho-ke, ungathola ukuthi umthengisi wakho we-CFD okhethiwe unikeza amandla we-cryptocurrency we-1: 20 noma ngaphezulu. Uma uvinjelwe izwe ohlala kulo - okuwukuphela kwendlela ezungeze lokhu ukuvula i-akhawunti njengeklayenti elisebenzayo. Lokhu, noma kunjalo, kudinga ukuthi kuhlangatshezwane nemibandela ethile - njengokufakazela ukuthi wake wasebenza phambilini emkhakheni wezinsizakalo zezezimali.
Amandla kanye neMargin
Lapho ufunda ukuthi ungasebenzisa kanjani amandla, konke kuqinisekile ukuthi uzothola umugqa wethemu. Kafushane nje, yize zombili izilinganiso kanye nomugqa kubhekisa ekhonweni lokukhulisa izigxobo zakho - empeleni zisho izinto ezimbili ezihlukile.
Ngokwesilinganiso, lokhu kuvezwa njengokuphindaphindwayo (isb. 5x) noma isilinganiso (isb. 1: 5). Imajini, nokho, ibhekisa enanini olidingayo beka njengesibambiso ukuze uthole isilinganiso sakho osifunayo / esiphindaphindwayo.
Ake sithi udayisa i-ETH / USD
Ufuna ukufaka u- $ 100 bese usebenzisa amandla we-1: 10
Lokhu kusho ukuthi inani lokuhweba kwakho likhuphukile lisuka ku- $ 100 laya ku- $ 1,000
Ngokulandelayo, isidingo semikhawulo kulo msebenzi ngu-10%
Ake sithi uhweba nge-XRP / USD
Ufuna ukufaka u- $ 500 bese usebenzisa amandla we-1: 5
Lokhu kusho ukuthi inani lokuhweba kwakho likhuphukile lisuka ku- $ 500 laya ku- $ 2,500
Ngokulandelayo, isidingo semikhawulo kulo msebenzi ngu-20%
Kubalulekile ukuqonda ukuthi kusho ukuthini imfuneko yomkhawulo - ngoba lokhu kuzonquma ukuthi isikhundla sakho se-cryptocurrency esinqunyelwe sivalwe nini ngumthengisi.
Lapho ufunda ukuthi ungasebenzisa kanjani amandla, ingozi enkulu okudingeka uyicabangele yileyo yokuqedwa. Ngendlela eyisisekelo kunazo zonke, ukuvalwa kwemali kwenzeka lapho umthengisi evala ukuhweba kwakho okuthengisiwe esikhundleni sakho. Lokhu kuzokwenzeka ngoba isikhundla sakho sehle ngenani elithile futhi ngalokho - umthengisi akanakho okunye ngaphandle kokuvala ukuhweba.
Njengesibonelo esilula, uma uhweba ngokusetshenziswa kuka-1: 20 - lokhu kusho ukuthi imfuneko yakho yemikhawulo ingu-5%. Ngokulandelayo, uma inani lokuhweba kwakho nge-cryptocurrency lehla ngama-20% - uzokhishwa. Uma lokhu kwenzeka, umthengisi ngeke avale isikhundla sakho kuphela - kepha uzogcina umkhawulo wakho.
Ukunamathela kulesi sibonelo esingenhla, ake sithi ekuhwebeni kwakho okuthengisiwe okungu-1: 20 ubeke u- $ 200.
Lokhu kusho ukuthi uhweba nge $ 4,000 kanti imajini yakho ifinyelela ku- $ 200 - noma u-5%
Inani lezohwebo zakho lehla ngo-5% ngakho-ke uyaqedwa
Kanjalo, ulahlekelwa yi-margin yakho yonke - eyi- $ 200
Ukuze unciphise ubungozi bokuqedwa, kufanele uhlale uthumela i-oda lokulahleka kokuma endaweni yakho. Lokhu kuzokwazisa umthengisi wakho ukuthi avale isikhundla sakho lapho sehla ngenani elithile. Isibonelo, uma imfuneko yakho ye-margin ingu-10% - ungahle uthathe isinqumo sokusetha i-oda lokulahleka kwe-stop ngo-1%. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi uyaphuma ekuhwebeni okulahlekelwayo isikhathi eside ngaphambi kokuthi kufike ndawo eduze nendawo yokuqothula impahla.
Abadayisi Abakhulu Bokusetshenziswa Kwe-Cryptocurrency
Ukuze manje usuqonde ngokuqinile ukuthi amandla wokuphaka asebenza kanjani, manje udinga ukukhetha umthengisi ofanelekile. Ngemuva kwakho konke, akubona bonke abathengisi abaku-inthanethi abavumela ukuthi uhwebe ama-cryptocurrensets ngezinga eliphakeme. Futhi, udinga ukubheka ezinye izinto ngaphandle nje kokutholakala kwesilinganiso, njengezimakethe ezisekelwayo ze-crypto, izimali namakhomishini, izinkokhelo, nomthethonqubo.
Ukukusindisa ekuphequluleni inqwaba yamapulatifomu - ngezansi uzothola ukukhethwa kwabathengisi abahamba phambili abanikeza amandla we-cryptocurrency ngo-2021.
1.Capital.com - Ipulatifomu Yokuhweba Okuphelele Ye-Cryptocurrency 2021
ICapital.com ngumthengisi we-CFD okalwe kakhulu onikeza izinkulungwane zezimakethe zezezimali. Lokhu kufaka phakathi amasheya avela ekushintshaneni okuningi, ama-ETF, ama-indices, i-forex, nempahla. Mayelana nezimakethe ze-cryptocurrency ezisekelwayo, iCapital.com ikunikeza ukufinyelela kumabhangqa angaphezu kuka-200 +. Lokhu kufaka phakathi ama-majors pair afana ne-BTC / USD ne-LTC / USD kanye nezinketho ezingaphansi ketshezi. Isibonelo, ipulatifomu likhaya ngaphezulu kwezinhlamvu zemali ezingama-30 + ze-DeFi, kanye namabhangqa we-crypto-cross.
Ngaphandle kokubheka ukuthi iyiphi i-cryptocurrency pair ofisa ukuyidayisa ku-Capital.com, ungafaka amandla esikhundleni sakho. Nakulokhu futhi, imikhawulo yakho izoncika lapho uhlala khona, umbhangqwana othile owuqeqeshayo, nokuthi uthathwa njengekhasimende elidayisayo noma elikhokhelwayo. Ngaphezu kokukwazi ukusebenzisa amandla, iCapital.com iphinde inikeze ukuthenga nokuthengisa ama-oda kuzo zonke izimakethe zayo ezisekelwayo. Lokhu kusho ukuthi ungazama ukwenza inzuzo kuzo zombili izimakethe ezikhuphuka nezikwelekayo - kuya ngokuthi ucabanga ukuthi laba bazokhuphuka noma behle yini.
Uma kukhulunywa ngezimali zokuhweba, iCapital.com ingumthengisi wekhomishini ongu-0%. Lokhu kusho ukuthi zonke izimali zokuhweba zakhiwe ekusabalaleni - okuyigebe phakathi kwentengo yokuthenga nokuthengisa. Mayelana nokuqalisa, ama-akhawunti eCapital.com athatha ngaphansi kwemizuzu engu-5 ukuvula. Ungafaka imali ngezindlela ezahlukahlukene zokukhokha - kufaka phakathi amakhadi wedebithi / wesikweletu, ama-e-wallets, kanye nokudluliswa kwe-akhawunti yasebhange. Zonke izinhlobo zokukhokha - ngaphandle kokudluliswa kwebhange, iza nediphozi encane engama- $ 20 nje kuphela.
Ipulatifomu elula yokuhweba - enhle kuma-newbies
Ilawulwa yi-FCA ne-CySEC
0% ikhomishini, ukusabalala okuqinile, kanye ne- $ 20 idiphozi ephansi
Isisekelo kakhulu kubahwebi abanolwazi
Ama-67.7% wabatshalizimali abathengisayo balahlekelwa yimali lapho bethengisa ama-CFD nalo mhlinzeki
2. I-Avatrade - Ipulatifomu Enkulu Yokuhweba Yokuhlaziywa Kwezobuchwepheshe
Umthengiseli olandelayo ozomcabangela oseshweni lwakho lokuthola amandla we-cryptocurrency yi-AvaTrade. Kafushane nje,. I-AvaTrade yipulatifomu yokuhweba ye-forex ne-CFD edume kakhulu ekuvumela ukuthi ungene ungene futhi uthengise izikhundla ezimakethe ezingaphezu kwe-1,200+. Lokhu kumboza izinqwaba zamabhangqa emali edijithali - konke okungathengiswa ngokusizakala. Ungathengisa futhi amasheya, ama-indices, izimpahla, nokuningi. I-AvaTrade ithandwa kakhulu ngabadayisi bezinsuku ze-cryptocurrency abathanda ukwenza ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe.
Lokhu kungenxa yokuthi umhlinzeki unikeza amapulatifomu amaningana - konke okugcwele amathuluzi nezici eziphambili zeshadi. Izinketho zakho zifaka i-MT4, MT5, kanye nengxenyekazi yendabuko ye-AvaTrade. Uma ukhetha olunye lwechungechunge lwe-MetaTrader, uzokwazi nokuhambisa irobhothi lokuhweba nge-cryptocurrency. Uma kuhlelwe kahle, lokhu kuzokuvumela ukuthi uhwebe ama-cryptocurrensets ubusuku nemini ngendlela ezenzakalelayo ngokuphelele.
Uma kukhulunywa ngezimali zokuhweba, i-AvaTrade ibuye ibe ngumthengisi wekhomishini engu-0% enikeza ukusabalala okuqinile. Azikho izimali zokufaka noma zokukhipha izimali, ngakho-ke inkokhelo kuphela oyidingayo ukuthi unake imali ngezimali zasebusuku lapho ugcina isikhundla esivulekile sivulekele isikhathi esingaphezu kosuku. Ngokuya ngamalayisense, i-AvaTrade ilawulwa ngeziphathimandla zosayizi. Ipulatifomu nayo ihlela ukuphumela obala ngokuhamba konyaka. Ekugcineni, i-AvaTrade iyindlela enhle uma ufuna ukuhweba ngokuhamba - njengoba umthengisi weCFD enikeza uhlelo lokusebenza lweselula olukalwe phezulu.
Izinkomba eziningi zobuchwepheshe namathuluzi okuhweba
I-akhawunti yedemo yamahhala yokuzijwayeza ukuhweba
Awekho amakhomishini futhi alawulwa kakhulu
Mhlawumbe kufaneleke kakhulu kubathengisi abanolwazi
Ama-71% wabatshalizimali abathengisayo balahlekelwa yimali lapho bethengisa ama-CFD nalo mhlinzeki
Ungayisebenzisa Kanjani Inzuzo Namuhla - Isifundo Esigcwele
Kusha ngokuphelele kwi-cryptocurrency leverage futhi udinga ukuholwa okuncane ukuze uqalise? Uma kunjalo, landela okokufundisa okungezansi ukuze ufunde indlela yokusebenzisa amandla manje!
Isinyathelo 1: Vula i-Akhawunti ye-Crypto Broker
Qonda kuwebhusayithi yeCapital.com bese uqala inqubo yokubhalisa i-akhawunti. Ukuphela-ekugcineni, lokhu kuzokuthatha kungadluli imizuzu eyi-10 ukuthi uqede.
Ukuze ibhola ligingqike, uzodinga ukufaka imininingwane yomuntu -
Lokhu kuzofaka phakathi kwakho:
Njengoba i-Capital.com ilawulwa yimigwamanda eminingana ehlonishwayo yezezimali - kuzodingeka futhi ukuthi ulayishe ikhophi yepasipoti yakho, ilayisense lokushayela, noma ikhadi le-ID likazwelonke.
Vula i-Akhawunti Yokuhweba ye-Crypto
Isinyathelo 2: Yenza Idiphozithi
Udinga kuphela ukuhlangabezana nediphozithi ephansi yama- $ 20 ukuze uqale ukuhweba ama-CFD akhokhelwe ku-Capital.com. Ungakhetha kusuka kudebhithi / ikhadi lesikweletu noma i-e-wallet bese idiphozi yakho izocubungulwa khona manjalo. Okuhle kunakho konke, iCapital.com ayikhokhisi noma iyiphi imali yediphozithi!
Isinyathelo 3: Sesha Imakethe ye-Crypto
Uma wazi ukuthi iyiphi i-cryptocurrency ofisa ukuyidayisa, yiseshe. Isibonelo, sibheke ukuhweba i-Ripple, ngakho-ke sifake i-XRP ebhokisini lokusesha. Ngemuva kwalokho, sichofoza ku-XRP / USD ukuya emakethe efanelekile.
Isinyathelo 4: Faka i-oda bese usebenzisa ukusebenzisa
Manje uzodinga ukusetha i-oda lokuthenga noma lokuthengisa.
Uma ucabanga ukuthi i-cryptocurrency izokhuphuka ngenani, khetha i-oda lokuthenga
Uma ucabanga ukuthi i-idijithali yemali izoba senani, khetha i-oda lokuthengisa
Okulandelayo, faka isigxobo sakho, ngaphambi kokukhetha isilinganiso sakho sokulinganisa. Isibonelo, unganquma ukufaka u- $ 50 bese usebenzisa amandla we-1: 2.
Ekugcineni, qinisekisa i-oda. Futhi yilokho - usanda kufunda ukuthi ungayisebenzisa kanjani inzuzo lapho uhweba ama-cryptocurrensets ku-Capital.com!
Ungasisebenzisa Kanjani Isilinganiso: I-Bottom Line
Ngokufunda lo mhlahlandlela kusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni, manje kufanele wazi ukuthi ungasebenzisa kanjani amandla. Hhayi nje kuphela ukuthi simboze ukungena nokuphuma kokuthi isisetshenziswa sisebenza kanjani, kodwa futhi sibuyekeze nabathengisi abaphambili be-cryptocurrency ngale njongo.
Siphethe ngokuthi ebhodini lonke - iCapital.com ingumhlinzeki ongcono kunabo bonke we-leverd cryptocurrency CFDs.
Ipulatifomu ayilawulwa kakhulu kuphela, kepha ikuvumela ukuthi uhwebe ngo-0% nokusabalala okuqinile. Futhi, uzonikezwa ukuziphilisa ezimakethe ezingaphezu kwezingu-200 + ze-cryptocurrency nezinkulungwane zezinye izinsimbi zezezimali - njengezitoko, i-forex, nempahla.